Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Washington DC ee arimaha GA lagu gorfeynayay oo qaybtisii kowaad la soo gabagabeeyay
Shirkii Washington DC ee arimaha GA lagu gorfeynayay oo qaybtisii kowaad la soo gabagabeeyay
Waxaa sidii la filayay lagu qabtay maalinimadii Arbacada ee 7dii Sebtember magaalada madaxda Maraynkan ee Washington DC shir ay si wada jir ah u soo diyaariyeen hay’adaha kala ah IHASA, Woodrow Wilson Center iyo Alliance for Peacebuilding.
Shirkan oo albaabada loo xidhay ayaa diirada lagu saarayay colaada ka jirta Geeska Africa iyo sidii si nabad iyo cadaalad ah loogu soo afjari lahaa. Waxaa kasoo qayb galay madax sare oo ka kala socotay labada aqal ee Baarlamaanka dowlada Maraykanka iyo maamulka hada talada haya ee Obama.
Arima badan ayaa lagu gorfeeyey shirka maalintiisii 1aad. Waxaa ka mid ahaan arimaha sida fiican looga hadlay xaaladaha ka jira gobolka iyo saamaynta ay ku leeyihiin qurba joogta taasoo aan ilaa hadda wax nabad iyo hormar ah u keenin dadka ku nool Geeska Africa.
Madaxdii ka hadlay shirka waxay muujiyeen in ay saluugsan yihiin siyaasada Maraykanka oo ku mashquulsan oo kali ah arimaha la dagaalanka argagixisada iyagoo dhinac isaga dhigay sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinka kale ee gobolka ka jira oy ugu horeeyaan xad-gudubka xuquuqul insaanka iyo dagaalada aan dhamaadka lahayn ee la fac tirsaday gobolka, waxayna ku taliyeen in si dagdag ah wax looga badalo siyaasada Maraykanga iyo Europe hadii la doonayo in la helo nabad waarta inay ka hirgasho Geeska Africa.
Waxaa kaloo ay khubaradii iyo madaxdii shirka fadhiday kula taliyeen dowlada Maraykan in ay ka fiirsato cid ay kala saaxiibayso Geeska Africa oo marar badan dano gaar ah ka leh saaxiibtinimada Mareykanka.
Shirka qaybtiisa labaad ayaa dhici doona maalinta Arbacada ah oo bishu tahay September 14ka. Qaybtan ayaa lagu marti qaaday jaaliyaadka dibada in ay iyaguna fikirkooda ka dhiibtaan si kadib loogu gudbayo talooyinka ka soo baxa shirka oo dhamaystiran madaxda labada aqal iyo maamulka Obama oo ka codsaday Wilson Center markii hore in ay talooyin ka soo siiyaan maadama ay muuqato in lagu wareersan yahay sidii xal loogu heli lahaa Geeska Africa.
Kasoo qayb galayaashii shirka ayaa u mahadceliyey machadka IHASA iyo Woodrow Wilson Center iyo Alliance for Peacebuilding dadaalka iyo dareenka ay arintan galiyeen iyo sida ay uga go’antahay in xal ay u helaan xaaladda Geeska Africa.